Juni 2021: Okuhle, okubi nokuthakazelisa kwe-Free Software | Kusuka kuLinux
Ngalolu suku lokugcina lwe- Juni 2021, njengenjwayelo njalo ekupheleni kwenyanga ngayinye, sikulethela lokhu okuncane resumen, kokunye kakhulu izincwadi ezifakiwe yaleso sikhathi.
1 Isifinyezo sikaJuni 2021
1.1.4 Okunye Okuthunyelwe Okunconyiwe kukaJuni 2021
1.2.1 Juni 2021 Ukukhishwa kwe-GNU / Linux Distros Ngokuya nge-DistroWatch
Isifinyezo se- Juni 2021
Kuthathe onjiniyela abangaphezu kuka-80 ukulungisa 'ukungcola' okwenziwe ngabafundi eNyuvesi yaseMinnesota
IBlender 2.93 LTS: Konke mayelana neBlender nenguqulo yayo entsha ye-LTS iyatholakala
Okunye okuthunyelwe okunconyiwe kusuka ku- Juni 2021
I-OpenExpo Virtual Experience 2021, ingenye yezenzakalo ezidume kakhulu zeSoftware Free. (Bheka)
I-Polygon: Umthombo ovulekile we-DeFi Ecosystem yama-Blockchain Networks. (Bheka)
IFirefox 89 ifika nezinguquko zesixhumi esibonakalayo, umshini wokubala kubha yekheli nokuningi. (Bheka)
Ama-wallet wephepha: Ama-web akhiqiza izikhwama zamaphepha womthombo ovulekile. (Bheka)
UJami "Maloya" ufika nezithuthukisi zesixhumi esibonakalayo, ukuhlanganiswa kwamakhasimende kweWindows neLinux, nokuningi. (Bheka)
Imidlalo ye-AppImage: Ungayitholaphi imidlalo eminingi ye-AppImage? (Bheka)
I-OpenExpo Virtual Experience 2021, impumelelo eyayingeyona iDeepFake. (Bheka)
I-Google ikuhlehlisile ukusetshenziswa kwe-FloC ku-Chrome kuze kube ngu-2023. (Bheka)
I-TPM: Okuncane konke mayelana neModyuli Yesikhulumi Esithenjiwe. Futhi ukusetshenziswa kwayo ku-Linux! (Bheka)
Juni 2021 Ukukhishwa kwe-GNU / Linux Distros Ngokuya nge-DistroWatch
I-LibreELEC 10.0 Beta 5: 2021-06-24
I-Proxmox 7.0 Beta 1 "Imvelo Ebonakalayo": 2021-06-24
ISUSE Linux Enterprise 15 SP3: 2021-06-23
I-Android-x86 8.1-r6: 2021-06-23
I-Emmabuntüs DE4 RC1: 2021-06-21
I-Rocky Linux 8.4: 2021-06-21
I-IPFire 2.25 Core 157: 2021-06-21
I-Linux Mint 20.2 Beta: 2021-06-18
I-Network Security Toolkit 34-12743: 2021-06-17
I-OS 6.0 Beta 2 yokuqala: 2021-06-16
Iseva ye-SME 10.0: 2021-06-15
I-Rocky Linux 8.4 RC1: 2021-06-09
I-Redcore Linux 2101: 2021-06-09
IGeckoLinux 153.210608: 2021-06-08
I-CentOS 8.4.2105: 2021-06-04
I-Rescuezilla 2.2: 2021-06-03
I-NixOS 21.05: 2021-06-02
I-OpenSUSE 15.3: 2021-06-02
IKali Linux 2021.2: 2021-06-01
IClonezilla Bukhoma 2.7.2-38: 2021-06-01
11-06-2021 - I-FSF ne-GNU bahambisa iziteshi ezisemthethweni ze-IRC kunethiwekhi yeLibera.chat: Ngenxa yalomhlangano nokubuyekezwa kwethu, i-FSF ne-GNU banqume ukuhambisa iziteshi zethu ze-IRC eLibera.Chat. Kusebenza ngokushesha, iLibera yikhaya elisemthethweni leziteshi zethu, ezibandakanya, kepha ezingakhawulelwe kuzo, zonke izindawo zamagama ze- #fsf, #gnu ne- # libreplanet. (Bheka)
15-06-2021 - Ukuvuselelwa kohlelo lwe-FSF ne-GNU ukuhambisa iziteshi ze-IRC kuLibera.Chat: Iziteshi ze- #fsf ne- #gnu kunethiwekhi yeFreenode zithathwa njengezingekho emthethweni futhi ngeke zihlolwe ngabasebenzi be-FSF noma amavolontiya e-GNU. Ukuze ungadidisi abasebenzisi, abangacabanga ukuthi iziteshi ze- #fsf ne- #gnu kuFreenode yiziteshi ezisemthethweni zezinhlangano zethu, i-alias irc.gnu.org ihoxiswa ngokushesha. Esikhundleni salokho, manje ikhomba kuseva yethu ezokwazisa amaklayenti e-IRC azama ukuxhuma kuyo ngokufudukela kwethu kunethiwekhi yeLibera.Chat. (Bheka)
24-06-2021 - Sekela ithimba lobuchwepheshe le-FSF: Indlela ephumelela kunazo zonke yokweseka i-FSF nethimba lethu lobuchwepheshe elinesibindi ukusijoyina njengelungu elihlobene nathi. Uma ungakwazi ngokwezimali ukuzibophezela ekubeni yilungu elihlobene naye, siyaqonda: ukusabalalisa igama kubaluleke ngendlela efanayo! Thatha isikhashana ukuheha umphakathi ngesidingo sesoftware yamahhala. Sebenzisa i-hashtag #UserFreedom, bese wabelana ngalo mlayezo neminye ukuze usisize sakhe ukwesekwa futhi sifinyelele umgomo wethu wokuqongelela imali ongu- $ 50.000 ngoJulayi 16. (Bheka)
04-06-2021 - Imininingwane esebenzayo kumthombo ovulekile: Umcimbi Omusha, I-CFP Ivula Namuhla!: I-Open Source Initiative izobamba umcimbi wezinsuku eziwuhafu ngoSepthemba 16 ukuxoxa nge-Open Source Practical Information (POSI). Izithameli zethu zalolu chungechunge amabhizinisi, okungenzi inzuzo, nezikhungo zemfundo ezinentshisekelo yokusebenzisa umthombo ovulekile ngaphezulu. (Bheka)
23-06-2021 - I-FOSS Yesikhathi Esizayo: Siyakwamukela kumaTeckids njengeLungu eliHlanganisiwe: Siyajabula ukumemezela ukuthi iTeckids eV ijoyina i-OSI njengeLungu eliHlanganisiwe. I-Teckids yinhlangano yezemfundo esekwe eJalimane egxile ekunikezeni izinsiza zeSoftware yamahhala namathuluzi abafundi nabafundisi. (Bheka)
Ukuze ufunde kabanzi ngezindaba zamadethi wangaphambilini, chofoza kokulandelayo isixhumanisi.
Njengenjwayelo, siyethemba lokhu "isifinyezo esincane esisebenzisekayo" ngamaphuzu avelele ngaphakathi nangaphandle kwebhulogi «DesdeLinux» ngenyanga ka «junio» kusuka ngonyaka we-2021, yiba nentshisekelo nokusetshenziswa okuhle, kwayo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwesimangaliso semvelo, esikhulu futhi esikhulayo sokusebenzisa kanye nokwenzelwe «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Juni 2021: Okuhle, okubi nokuthakazelisa kweSoftware yamahhala
Bathola ukuba sengozini ku-Pling okuthinta Isitolo se-KDE, i-OpenDesktop, i-AppImage nezinye izitolo